बेहुलाले दुई दुना नजान्दा बिहे नै रद्द – Life Nepali
दुनियाँमा कहिल्यै बेहुला वा बेहुलीले जोड, घटाउ, गुणन वा भागाको हिसाब नजानेको विषयले बिहे नै रद्द भएको सुन्नुभएको छ ? शायद यस्तो दुनियाँमा अन्त कहीं हुन्न होला । तर हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा भने यस्तै घटना भएको छ ।
वास्तवमा जीवनसाथी छान्नका लागि हुनेवाला जीवनसाथीका निश्चित क्षमता वा दक्षता जसले पनि हेर्दछ । त्यसमध्ये शैक्षिक स्तर एउटा महत्वपूर्ण मापदण्ड हो ।
कतिपयले बिहे टुंगो लागिसक्दा समेत आफ्नो वास्तविक शैक्षिक योग्यता लुकाउने गर्दछन् । आफ्नो पति वा पत्नीसँग आफ्नो शैक्षिक योग्यता लुकाएर लुक्ने कुरा कहाँ पो हो र ? एकदिन खुलासा भैहाल्छ भन्नेपनि हेक्का हुँदैन कतिपयलाई ।
अन्ततः बेहुलीको घोषणा अनुसार नै दुवै पक्षले समझदारीमा बिहे रद्द गर्ने निर्णय गरे । एकले अर्को पक्षलाई दिएका उपहार लगायतका वस्तुहरु समेत फिर्ता गर्ने समझदारी भएसँगै प्रहरीले यस विषयमा कुनै मुद्दा दायर नगरेको बताइएको छ ।
Previous कृष्ण कंडेललाइ भेटाइदेउ भन्दै टिका सानुको आगाडी मुर्छा पर्ने गरि रोइन आमा ,टिकाको थामिएन आँसु
Next लकडाउन‍मा कडाई : धरान, इटहरी र इनरुवामा सेना परिचालन